ब्याकलिks्क तपाइँको साइट को लागी उपयोगी ब्याकलिंक्स कसरी प्राप्त गर्ने बारे Semalt सल्लाह
तपाइँ कसरी राम्रो ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्नुहुन्छ? यस लेखमा, तपाई ब्याकलिks्कहरू र लिंक निर्माणको बारेमा सबै कुरा जान्नुहुनेछ। ब्याकलिks्कहरू अन्य वेबसाईटहरूबाट तपाईलाई आउने लिंक हुन्। यी ब्याकलिks्कहरू जहिले पनि गुगलको एल्गोरिथ्म (एसईओ) को आधार भएको छ किनकि रोबोटहरूले यसलाई सिफारिसको रूपमा लिन्थ्यो।
जब गुगल पहिलो पटक अस्तित्वमा भयो, रेटिंग प्रणालीको आधार खोज परिणामहरूको प्रदर्शनमा व्यवस्थित गरियो।
SERP वा खोज परिणामहरूको पृष्ठ मुख्य पृष्ठ हो जसमा त्यहाँ इन्टरनेट खोजी ईन्जिन छ जुन साइटले कति ब्याकलिlin्कमा आधारित थियो। गुगलले पत्ता लगायो कि यदि धेरै साइटहरूले निश्चित वेबसाइटमा लि to्क गर्दछ भने, त्यो वेबसाइटको उच्च मूल्य हुनुपर्दछ र यसैले यसलाई खोजी परिणामहरूमा उच्च राखिएको हुन्छ।
प्रत्येक लिंक तपाइँको वेबसाइट को लागी 'भोट' को रूप मा देखियो। यी भोटहरू (ब्याकलिंक्स) सँगै तपाइँको '' वेबसाइट लोकप्रियता '' निर्धारण गर्दछ र तपाइँको वेबसाइट को लोकप्रियता मापन गर्न ल्यारी पृष्ठ तथाकथित पृष्ठ रैंक भनिन्छ।
यो तपाइँको वेबसाइटको लागि ०-१० अ score्कको एक प्रकारको हो, केवल इनबाउन्ड लिंकहरूको संख्या र मानले निर्धारण गर्दछ। सुरुमा, गुगलले तपाईको वेबसाइटमा ब्याकलिlin्कहरूको संख्या गणना गर्‍यो। तपाईसँग धेरै ब्याकलिks्कहरू थिए, गुगलमा तपाईंको वेबसाइटले जति राम्रो स्कोर बनायो। पछि, ब्याकलि and्कको गुणस्तर र प्रासंगिकता बढी मानिन्छ र कम मात्रामा।
जैसा कि उल्लेख गरिएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं केवल 'लि building्क भवन' (ब्याकलिks्कहरू जम्मा गर्ने) प्रविधिहरू लागू गर्नुहुन्छ जुन आज पनि काम गर्दछ र यसैले तपाईंको वेबसाइटलाई मूल्य दिनुहोस् र गुगलको मूल्यांकन प्रणालीमा प्रतिष्ठा। तल केहि निश्चित चीजहरूको एक सूची छ जुन लि link्क निर्माणको सम्बन्धमा तपाईंले गर्नुपर्दछ वा गर्नु हुँदैन।
तपाईं कसरी गुणवत्ता ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
गुणात्मक ब्याकलिंक के हो? यसको लागि तपाइँले धेरै चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ:
यदि तपाइँसँग लिंक गर्ने साइट तपाइँसँग केहि गर्न को लागी गरीएको छैन भने, गुगलले पनि लिंक अप्रासंगिक फेला पार्नेछ र यसैले तपाइँलाई धेरै कम उत्पादन गर्दछ। उदाहरण को लागी, जानकारी मार्केटिंगको साथ वेबसाइटमा उद्यमशीलता को बारे मा एक वेबसाइट को लिंक प्रासंगिक छ र यसैले जोडिएको मान।
एक मार्केटिंग वेबसाइटमा लिंकको साथ एक बागवानी वेबसाइट अप्रासंगिक हो र त्यसैले तपाईंको रैंकिंगमा कम योगदान गर्दछ
श्रेणीकरणको शाब्दिक अर्थ "क्रममा राख्नु" हो। जब यो इन्टरनेट मार्केटिंग को लागी आउँछ ..
प्राकृतिक लिंक प्रोफाइल बनाउनाले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं एल्गोरिदमिक वा म्यानुअल रूपमा गुगल द्वारा ब्याकलिंक्स अभ्यासहरू मार्फत सजाय पाउनुहुनेछ। एक प्राकृतिक लि profile्क प्रोफाइलको अर्थ यो हो कि लिंकहरू विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरूबाट आउँदछन् र तपाईंको वेबसाइट भित्र सबै प्रकारका फरक पृष्ठहरू र लेखहरू सन्दर्भ गर्दछ।
गुगलले जान्न चाहान्छ कि लि another्कले अर्को वेबसाइटलाई के प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसकारण लि of्क गरिएको पाठको एउटा टुक्रा डोमेन नाम उल्लेख गर्नु भन्दा राम्रो गुणको हुन्छ। उदाहरण को लागी:
जब तपाईं 'यहाँ क्लिक गर्नुहोस्' को लागि खोजी गर्नुभयो भने Adobe सधैं गुगलमा पहिलो हुन्छ। यो किनभने इन्टरनेटमा धेरै वेबसाइटहरूले "पीडिएफ एडोब रिडर डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्" को साथ उनीहरूको पीडीएफ डाउनलोडमा पाठको एक टुक्रा थपे। शब्दहरू 'यहाँ क्लिक गर्नुहोस्' त्यसपछि Adobe साइटमा क्लिक गर्न योग्य हुनेछ र Google ले Adobe साइट 'यहाँ क्लिक गर्नुहोस्' शब्दसँग सान्दर्भिक भएको पाए।
निश्चित गर्नुहोस् कि अन्य वेबसाईटहरूबाट आएका लिंकहरूले सबै समान ए an्कर पाठ प्रयोग गर्दैनन्। यो तपाइँको वेबसाइटको लागि तपाइँको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण खोज सर्तहरू क्लिकयोग्य बनाउन राम्रो भएको थियो। यद्यपि गुगलको पेन्गुइन अद्यावधिक गरिएको थियो, एन्कर पाठ ओभर-अनुकूलन दण्डित भइरहेको छ। आजकल तपाईं पनि आगमन क्लिक गर्न योग्य पाठहरूको एक प्राकृतिक प्रोफाइल गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईं एक चित्रको लागि एक Alt ट्यागको साथ शीर्षक विशेषता तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकको शीर्षक हो। जब तपाईं लिंकमा आफ्नो माउस होभर गर्नुहुन्छ, यो देखा पर्दछ। यो शीर्षक देखाउँदछ, किनकि यो अन्तर्निहित पृष्ठको शीर्षक हो र तपाइँको शब्द संयोजनमा तपाइँको खोजनीयतामा योगदान गर्दछ।
यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, गुगलले वेबपृष्ठको प्रतिष्ठामा पनि हेर्छ (वेबसाइट होईन) जहाँ लिंक खुला छ। यदि मैले वेबसाइटमा पृष्ठबाट ब्याकलिink्क पाएँ जुन सबैमा राम्रो प्रतिष्ठा छैन भने, यसको कुनै असर पर्ने छैन। उदाहरण को लागी:
Twitter.com सँग9को पृष्ठरank्क छ, जुन अत्यन्त उच्च छ। मेरो खाता (यद्यपि यो कडा डोमेन नामले सहयोग पुर्‍याएको छ) सँग मात्र R पृष्ठको पेजरank्क छ। मेरो खाता पृष्ठ ट्विटरको होमपेज भन्दा धेरै कम कडा छ। मेरो खाताबाट एक ब्याकलिंक यसैले होमपेजबाट पनि कम मूल्य हुनेछ।
अब तपाइँ यो पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ कि जब तपाइँ तपाइँको सबै पृष्ठभूमिलाई तपाइँको गृहपृष्ठमा निर्देशित गर्नुहुन्छ, तपाइँको गृहपृष्ठ पृष्ठ पनि हुनेछ जुन तपाइँको वेबसाइटमा सब भन्दा बलियो हुनेछ। जब तपाईं ब्लग पाउनुहुन्छ तब यो ठीकै हुन्छ, तपाईंको नयाँ ब्लग पोष्टहरू सँधै होमपेजमा हुन्छन् र तुरुन्तै कडा स्थिति लिन्छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं निर्दिष्ट लेखहरूको साथ केहि खोज सर्तमा विशेष रूपमा स्कोर गर्न चाहानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग ती लेखहरूका लागि विशिष्ट ब्याकलिंक्स छ।
तपाइँ कसरी ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ?
ब्याकलिks्क प्राप्त गर्ने धेरै तरीका छन्। तल हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सब भन्दा सामान्य छलफल गर्छौं, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि प्रासंगिक लिंक निर्माण प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ दैनिक निर्माण लिंकहरुमा पन्ध्र देखि आधा घण्टा खर्च गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले प्राप्त गर्ने ब्याकलिंक्सको संख्या लामो अवधिमा धेरै बढ्नेछ र त्यसपछि गुगलको विचारमा यस प्रक्रिया प्राकृतिक रहन्छ।
तपाइँको "लि building्क भवन" सुरु गर्न तपाइँ केहि सुरू पृष्ठहरूमा साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। आज यो रणनीति पहिले भन्दा कम शक्तिशाली छ। किनकि घर पृष्ठले प्रत्येक लिंकको लागि कम मूल्य दिन्छ, पृष्ठमा अधिक लिंकहरू छन्, केही गृह पृष्ठहरू बहुमूल्य हुँदैनन्। साथै, सुरूवात पृष्ठ छनौट गरेर प्रासंगिकतामा ध्यान दिन को लागी प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाइटको शीर्षकसँग सकेसम्म नजिक छ।
तपाईं गुगलमा जान र पृष्ठहरू सुरू गर्न, जस्तै startpagina.nl, startgids.nl, Snelstarten.nl, Handystarten.nl, startkabel.nl र सयौं अन्य समान पृष्ठहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, सुरूवात पृष्ठहरू जाँच गर्नुहोस् र कुन उपपृष्ठमा तपाईं उत्तम रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। पञ्जीकरण पछि, एक बटन "लिंक थप्नुहोस्" खोज्नुहोस् वा प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। चेतावनी प्राप्त नगर्नुहोस् यदि तपाईंले प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएन वा यदि तपाईंको लिंक पोष्ट गरिएको छैन भने। त्यो सामान्यतया मामला हो; तपाईंले लि few्क पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूमा भर पर्नु पर्छ।
ब्याकलिks्क प्राप्त गर्ने अर्को विधि लेख मार्केटिंग हो। लेख मार्केटिंग एक लि building्क भवनको एक रूप हो जहाँ तपाईं आफ्नो लेखहरू आफ्नो वेबसाइटमा लिंकसहित सम्भव भएसम्म इन्टरनेटमा धेरै ठाउँमा प्रकाशित गर्नुहोस्। यी लेखहरू मार्फत, तपाईं प्रत्येक लेख अन्तर्गत तपाईंको वेबसाइटमा लिंक समावेश गरेर आगन्तुकहरू पाउनुहुनेछ, वा सम्भवतः तपाईंको वेबसाइटमा क्लिक गर्न योग्य पाठमा केही शब्दहरू बनाएर। यस तरिका तपाइँसँग आगन्तुकहरूको लागि अतिरिक्त च्यानल छ तर एकै समयमा, तपाइँले तपाइँको वेबसाइटको ब्याकलिंक्सहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ इन्टरनेटमा धेरै स्थानहरू छन् जहाँ तपाईं लेखहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसको उदाहरण हो Artikelplaats.nl। यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ, नामले पहिले नै भनेझैं लेखहरू तपाईंको वेबसाइटको लिंकमा राख्नुहोस्। अनुच्छेद स्थानका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले त्यसपछि यी लेखहरू लिन सक्छन् र तिनीहरूको आफ्नै वेबसाइटहरूमा राख्न सक्दछन् जब उनीहरूसँग सामग्रीको कमी हुन्छ। तिनीहरूले पक्कै पनि तपाईंको लिंक लिनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यस लिंक निर्माण विधिलाई अधिक प्रयोग गर्नुहुन्न किनकि कि यसले तपाईंको ब्याकलिंक प्रोफाइल बनाउँनेछ (जस्तो कि पहिले छलफल गरिएको छ) अप्राकृतिक।
तेस्रो विकल्प अरू कसैको वेबसाइटमा पाहुना ब्लगर बन्नु हो। त्यसोभए तपाइँ आफ्नो ब्लग पोष्टहरु तपाइँको वेबसाइट को लिंक संग राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै वेबसाईटका मालिकहरूलाई राम्रो ब्यक्तिगत लेखकहरूको आवश्यकता पर्दछ उनीहरूको ब्लगमा पूरक हुन किनकि तिनीहरूसँग अनुशासन वा प्रेरणा हुँदैन आफै त्यसो गर्न। तपाईं अरू कसैको ब्लग मार्फत पनि पूरै नयाँमा पुग्न सक्नुहुनेछ र तपाईं आफ्नो वेबसाइटको प्रतिष्ठामा र लेखकको रूपमा तपाईंको आफ्नै पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को तरिका भनेको ट्विटर खोजको प्रयोग गरी तपाईलाई जस्तो उस्तै विषयहरूमा ब्लग गर्ने मानिस फेला पार्न। यस व्यक्तिको ट्वीट रीट्वीट र मनपर्दछ र उसलाई वा उनको सन्देश एक आराम स्वरमा पठाउनुहोस्। यस तरीकाले पहिलो सम्पर्क पहिले नै बनेको छ, वा कम्तिमा यस व्यक्तिले तपाईंको नाम देखिसकेको छ। त्यसपछि उनलाई ब्लग पोस्ट पोस्ट गर्न ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
पाहुना ब्लगिंग लिंक को लागी व्यापक दुरुपयोग गरीएको छ, गुगल लिंक को बारे मा केहि अधिक शंकालु भएको छ कि स्पष्ट रूपमा अतिथि ब्लगिंग द्वारा amassed छन्।
सामाजिक मिडियाबाट लिंकहरू
गुगलले केहि समय पहिले नै संकेत गरिसकेको छ कि यसले सोशल मिडियामा पनि अझ बढी हेर्नेछ जब यो खोजी मेसिन अनुकूलनको लागि आउँदछ। यसको मतलब सोशल मिडियाबाट लिंकले पनि अधिक र अधिक प्रभाव पार्दछ। तपाइँको वेबसाइटमा सामाजिक मिडिया समावेश गरेर तपाइँ लिंकहरूको संख्या नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगलले सबै सामाजिक मिडिया लिंकहरू थप्दछ र तपाइँ सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट लि links्कहरू कसरी नियमित रूपमा लिनुहुन्छ भनेर पनि हेर्दछ। एकै पटक धेरै प्राप्त गर्नाले तपाइँलाई लामो अवधिको लागि मद्दत गर्दैन, तर प्रति ब्लग पोष्टमा असंख्य ट्वीट्स, प्लेस र "लाइकहरू" पाउँदा निश्चित रूपमा मद्दत गर्दछ!
के तपाई आफैले अरुसँग लिंक गर्नुपर्दछ?
एउटा साधारण प्रश्न यो हो कि तपाईंले आफैंले अन्य वेबसाइटहरूमा लि should्क गर्नुपर्दछ, किनभने धेरै वेबसाइट मालिकहरूले सोच्दछन् कि यसले तपाईंको आफ्नै वेबसाइटको शक्तिलाई कमजोर बनाउनेछ। त्यो मामला होइन ... तथापि; केवल वेबसाईटहरूमा लिंक जुन तपाइँको बारे मा लेख्न प्रासंगिक छ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइटमा बाहिर जाने लिंकहरू पनि गुणात्मक छन्। गुगलले यसको कदर गर्दछ जब तपाईं वेबसाईटमा आगन्तुकलाई आफ्नो साइटको अतिरिक्त अतिरिक्त जानकारीको साथ सन्दर्भ गर्नुहुन्छ। यो Google को राम्रो प्रतिष्ठा को साथ एक वेबसाइट को लागी एक जोड र प्राथमिकता हुनु पर्छ।
के लिंक एक्सचेन्ज महत्वपूर्ण छ?
लिंक एक्सचेन्जको सरल अर्थ यो हुन्छ कि तपाइँले तपाइँको वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा लि take्क लिनुभयो र त्यो वेबसाइटले तपाइँको वेबसाइटमा लि places्क राख्छ। यो एक रणनीति हो जुन (टाढाको) विगतमा राम्रोसँग काम गर्‍यो, तर अब गुगलले यसलाई सायद महत्त्व दिंदैन, किनकि सबैले लिंकहरू यस तरीकाले आदान प्रदान गर्न सक्दछन्।
यसमा १०० अन्य लिंकहरूको साथ "लिंक पार्टनरहरू" पृष्ठबाट एक ब्याकलि you्कले तपाईंलाई मूल्य बढाउँदैन। त्यहाँ अधिक आउटबाउन्ड लिंकहरू एक पृष्ठमा छन्, प्रत्येक लिंकको गुगलको सराहनामा कम मूल्य हुन्छ।
अर्को गृहपृष्ठबाट लिंकले सबै भन्छ। लिंक स्व्यापिंगको साथ, सधैं यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक अर्काको पूरक हुनुहुन्छ, तब गुगल समस्या हुनेछैन। यदि तपाईं लि exchange्कहरू साटासाट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो उत्तम छ कि एबीसी-लिinking्क गर्न, जुन which वेबसाइटहरू ए, बी, र सीसँग काम गर्दछ।
मानौं तपाईंसँग २ वेबसाइटहरू छन् (A र C) तपाईं अर्को वेबसाइट (B) बाट ब्याकलिंक लिन चाहानुहुन्छ, तर बी ब्याकलिंक लिन चाहन्छ। तपाईले आफ्नो दोस्रो वेबसाइट (C) बाट B मा लिंक फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र B बाट तपाईंको वेबसाईट (A) मा लिंकको सट्टामा फिर्ती लिंकको रूपमा। यस तरिकाले त्यहाँ एक अर्कासँग कुनै सम्बन्ध छैन र त्यसैले यो खोज इञ्जिनहरूका लागि राम्रो छ। त्यहाँ वेबसाइट A र C का बीचमा कुनै थप सम्बन्ध नहुन सक्छ र यो रणनीति पनि मध्यस्थतामा उत्तम रूपमा लागू गरिएको छ।
तपाईं सजिलैसँग आफ्नो ब्याकलिks्कहरू एक राम्रो "ब्याकलिl्क परीक्षक" मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग उन्नत तर धेरै सरल उपकरणहरू छन् र प्रायः सबै उपकरणहरूले फरक नतीजाहरू दिन्छन्। तपाईले पहिलो छाप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि कसले तपाईंलाई सबै जाँचकर्ताको साथ सबै लिंकहरू पठाएको थियो। ब्याकलिंक्स चेकर्सको माध्यमबाट, तपाइँ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको ब्याकलिंक्स पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ र यसरी उनीहरूले उनीहरूका लि get्कहरू कहाँ पाउनेछन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
आन्तरिक लिंक बनाम ब्याकलिks्क
संक्षिप्त रूपमा आन्तरिक लि and्कहरू र ब्याकलिks्कहरू बीच भिन्नता: आन्तरिक लिंकहरू लि the्क हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटबाट अन्य वेबसाइटहरूमा संकेत गर्दछ। किनकि यी लिंकहरू तपाईंको आफ्नै हुन् र कम मूल्य छ। अवश्य पनि, गुगल तपाईंको आधिकारिकतामा तपाईंको आफ्नै वेबसाइटमा यत्तिको विश्वासमा छैन, तपाईंको आन्तरिक लिंकहरूलाई ब्याकलिlin्कको समान मूल्य प्राप्त गर्न अनुमति दिन। जे होस्, आन्तरिक लिंकहरू एक किसिमको सिफारिसको रूपमा काम गर्दछन्।
जब तपाईं पृष्ठ A बाट पृष्ठ B मा लिंक गर्नुहुन्छ, पृष्ठ A ले पृष्ठ बीमा एक प्रकारको सिफारिश दिन्छ। एन्कर पाठ आन्तरिक लिंकहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, के तपाईं पहिलो पृष्ठमा निश्चित कीवर्ड संयोजनमा स्कोर गर्नुहुन्छ तर गुगलमा पहिलो स्थानमा हुनुहुन्न? त्यसोभए त्यस लेखमा आन्तरिक लिंक समावेश गर्न को लागी नयाँ लेखहरूमा तपाइँ निश्चित समयको लागि पोष्ट गर्नुहोस्। त्यसो भए त्यो किवर्ड संयोजन क्लिक गर्न योग्य बनाउँनुहोस्। तपाईं यो आफ्नो Google रैंकिंग प्रभाव देख्नुहुनेछ।
त्यसोभए, म आशा गर्दछु कि हाम्रो सल्लाहहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। पहिले नै भएका कम्पनीहरूका लागि हाम्रा ग्राहकहरु, यी विधिहरू प्रभावकारी छन् र लि building्क निर्माणमा राम्रो थप थप जुन हामी तपाईंको कम्पनीको लागि गर्दैछौं।
के तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ कि यी विधिहरूले ब्याकलिlin्क मात्र प्रदान गर्दैन तर तुरुन्तै अतिरिक्त ग्राहकहरू पनि उत्पन्न गर्दछ। अतिरिक्त लि Ob्कहरू प्राप्त गर्नाले तपाईंलाई खोज ईन्जिनमा अधिक शक्ति र अधिक दृश्यता दिन्छ।
के तपाइँसँग तपाइँको व्यवसाय को लागी स्थानीय लिंकहरु को बारे मा कुनै प्रश्न छ? वा तपाइँ कसरी तपाइँको कम्पनी को सबै भन्दा राम्रो को लागी यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बारे उत्सुक हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छौं।